Article submitted by: minkyaw thuyein on 1-Apr-2013
ဖြစ် သမျှအကြောင်း အကောင်းကြီးဘဲ တဲ့ လား
ဒို.လူကလေးများ ဆိုသလေး ?
သမိုင်းဆရာတချို.အပါအ၀င် တချို.သူတွေက ( မြန်မာနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ် လက်အောက် ကျွန်သဘောက် ရောက်ရတာ မြန်မာတွေ အသုံးမကျလို.မဟုတ်ဘူး၊ ကံ ဇါတါ ပါလို.ဖြစ်ရတယ် ) လို. သုံးသတ်ထားတယ် ၊ ဟုတ်ပါ လိမ့်မယ်၊ ဟုတ်နိုင်ပါတယ်၊ မြန်မာတွေဟာ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ သင်္ခါရ ဆိုတာကို စွဲမြဲစွာ ယုံကြည်လက်ခံ ထားကြသူ တွေဖြစ်ပါ တယ် ။ ဖြစ်သမျှအကြောင်း အကောင်းချည်းဘဲ လို.လဲ လက်ခံထားကြတာပါ ။
တနည်းပြောရရင်တောh မြန်မာတွေ သွေးကြောင်တာဘဲ ၊ ထစ်ကနဲဆို အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ သင်္ခါရ တဲ့၊ သူတို.လမ်း ပျောက်ပြီး မျက်စေ့လယ် လမ်းမှားပြီ ၊ အဖြေရှာ မရဘူးဆိုရင် အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ သင်္ခါရ ဘဲ ဆိုတော့ လွန်တာပေါ၊ ဗုဓ္ဒဘာသာတရား ကို အပေါစားကြီး လုပ်နေကြတယ်။
ဒီလိုပြောလို.ဗုဓ္ဒဘာသာကိုဆော်ကားနေတာမဟုတ်ဘူး၊ ဗုဓ္ဒဘာသာကို ခုတုန်းလုပ်နေတဲ့ မြန်မာတွေကိုပြောနေတာ။ ဗုဓ္ဒဘာသာဟာ လောကီ လောကုတ္တရာ ၂ ဖျာသောအကျိုးလို.ပြောတယ်၊ ဒီစကားကိုက လောကီဆိုတာ အရင်လာပြီး လောကုတ္တရာက နောက်ကလာတယ် ။ လောကီကိုညီးငွေ.ရင် ထွက်ရပ်ပေါက်လမ်းတွေအများကြီးရှိတယ် ထွက်သွား ကြ လေ။ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ သင်္ခါရဆိုပြီးတမျိုး၊ လောကီ လောကုတ္တရာဆိုပြီးတဖုံ အပြောတွေ ၊အဟောတွေနဲ့သူများ မျက်ခုံးပေါ်လမ်းလျှောက်နေကြသူတွေ ဆီ ဥ ထောပတ်
စားပြီး လောက နိဗ္ပာန် သုခဘုံမှာ ခံစားနေကြသူတွေ ကလဲ တမျိုး၊ သူတိုကို ပံ့ပိုးရတဲ့.တာဝန်ကိုက မနဲဘူး ။ ဗုဓ္ဒဘာသာမဟုတ်တဲ့ သူများဘာသာတွေနဲ နှိုင်းကြည့်ဘို. လိုနေပြီ ၊ ဘယ်သူသေသေ ငတေ မာရင် ပြီးရော ဆိုတဲ့ စကား ၊ ငိုစားရယ်စားဆိုတဲ့ စကားတွေထဲမှာ သူတိုလဲ ပါသွားတယ်
ဗုဓ္ဒဘာသာဟာ လောကီ လောကုတ္တရာ ၂ ဖျာသော အကျိုးအတွက်လို. ဆိုထားတယ်၊ ဘာလုပ်ရမယ် ဆိုတာလဲ လမ်းပြထားပါတယ် ၊ သူများကို မကြည့်စိမ့် မရှူစိမ့် မနာလို ၀န်တိုပြီး ထရိုက်လို.တော မဟုတ်သေးဘူး ထင်တယ်။ ဗုဓ္ဒဘာသာဝင်တိုင်းကို မဆိုလိုပါဘူး ၊ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ.ကတော့ ဗုဓ္ဒဘာသာနိုင်ငံလို.ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံတွေဟာ သူများ လုပ်သမျှ ချည်း ခံနေကြရတာဘဲ ဆိုတာ တွေ ရတယ်။ သူတို.ကတော့ ရောင်ရဲ တင့်တိမ်နေတာလို.ပြောကောင်းပြော ကြလိမ့်မယ် ပေါ့လေ။ ရန်ကိုရန်ချင်း မတုန်နှင်းနဲ့ မေတ္တာတရားရှေ.ထားပါတဲ့ ။ ကိုယ်ကထားပေမဲ့ သူက မထားရင် ကော ? “ အကိုရယ် နင့် ဟာကြီး ၀င်သွားပြီ ဟဲ့ ” တဲ့၊ အဲဒါမှ မေတ္တာတဲ့လား?
မြန်မာ မိန်းခလေးတွေ လူမျိုးခြားနဲ့ ညားပြီး မျိုးမစစ်တွေ မွေးလာတာ မေတ္တာရဲ့အကျိုးတွေ ပေါ့၊ ခေါင်က စခဲ့တာတွေ သတိထားမိတယ် ဒီနေ.မြန်မာနိုင်ငံ မှာနင့်ဟာကြီး ဘယ်နှဟာ ၀င်သွားပြီလဲ သတိထားမိကြရဲ့လား?အားလုံးကောင်းပါသည် ခင်ဗျား တဲ့လား? အားလုံး မကောင်းဘူး ကိုရင် တို.ရေ.၊ ပြသနာတွေ တဖြေးဖြေး ပေါ်လာနေတာ သိကြတယ် မဟုတ်လား? အမွေ ခွဲဘို.ခက်မယ် နော် ။ စဉ်းစားသာ လုပ်ကြပေတော့ ။
ကံ ကို ဘယ်လို ယုံကြတာလဲ ၊ ကံ ယုံရင် ဆူးပုံပေါ် ခုန်ချပါလား တဲ့။ ဘာကြောင့် မီးထဲ ဂျောက် ထဲ ခုန်ချလို.မပြော သလဲ ? ကံ ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာကိုတော့ အတိအကျ လှေနံဒါးထစ်မရှိ အမျိုးမျိုးအဓိပါယ်ဖေါ်ကြပါတယ်၊ကိုယ်လိုရာ ကိုယ်ဆွဲ ပြောကြတာချည်းဘဲပေါ့ ၊ သူရှူဒေါင့်နဲ့ သူမှန်ခြင်မှန်မယ်
လို.ဘဲ ၊ ကျေအေးလိုက်ရမယ် ။ သူတိုအနေနဲ.ကလဲ ကျေရာကျေကြောင်း အခြေအနေအရပြောခဲ့တာလဲ ဖြစ်မယ် ။၊ လူကြီးတွေကို ကျေအေးလိုက်ရတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ ၊ သူတိုက ကိုယ့်ထက် သိနားလယ်ကြ
သူတွေပါ လို.ခံယူရင်ပေါ.လေ ။ “နွားလေးနို. နွားကြီးစို.”ဆိုတဲ့ စကားအရ
ဆိုရင် လူကြီးတွေ ဟာ ခေတ်နောက်ကျနေပြီ ။ လူငယ်တွေက ခေတ်မီတယ် ခေတ်နဲ.အလိုက် ခေတ်ပညာတွေတတ်ကြတာ၊ ဒါဖြင်. ခေတ် လူငယ် အချင်း ချင်း ကျတော့ ကော ဘယ်သူက ဘယ်သူထက် ဘာကို ပိုတတ်နေကြသလဲ ? သူတို့ထဲ မှာလဲ ကြီးသူ ငယ်သူ ရွယ်တူဆိုတာတော့ရှိမှာပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား?
ကံ ဆိုတာ ပြုလုပ်ခြင်း/ ဆောင်ရွက်ခြင်းလို. တချို.က ပြန်ဆိုတယ် ၊ ကံ ရဲ့ နောက်မှာ ၀ရိယ ၊ လုံလ လို.လဲ ဆက်ပြီး ပါလာတာဖြစ်တယ် ။ ဗုဒ္ဒဟော တဲ့ မင်္ဂင် ဂ ပါးဆိုတာနဲ့ တွဲကြည့်ရင် ပုံ ပိုပေါ်မယ်လို. အကြံပြုခြင်တယ် ။ ဒီနေရာမှာ ကံ ဆိုတာ ပြုလုပ်ခြင်း/ ဆောင်ရွက်ခြင်းလို. ကိုယ်ကတော့ စွဲမြဲစွာယုံကြည်တယ် ။
ကာယကံ=ကိုယ်ထိလက်ရောက် ပြုမူ ဆောင်ရွကခြင်း ၊ ၀ဇီ ကံ = နှုတ်(ပါးစပ်)စကားအားဖြင့်ပြောဆိုဆော်ငရွက်ခြင်း၊ မနောကံ=စိတ်ကူးအကြံအစည်အားဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ၃မျိုး ၃ စားမှာ အကယ်ဖြစ်မှုဟာ စိတ်ကူးအကြ့အစည်ကို၊ နှုတ်နဲ့ပြောဆိုပြီးနောက် ကိုယ် ထိလက်ရောက် ပါလာတယ်လို. မြင်ရတယ် ။ တခြား ကံ ဆိုတာတွေလဲ တခြားနေရာတွေမှာ ရှိသေးတာ ကို လက်ခံ ရမယ် ၊ ဥပမာ ကုသိုလ်ကံ ၊ အကုသိုလ်ကံ ဆိုတာဟာ ကောင်းမှူ ပြုခြင်း ၊ မကောင်းမှု ပြုခြင်းဘဲ ဖြစ်တယ် လို.ဘဲ နားလည်တယ်။ သူ.နေရာနဲ့ သူပေါ့ ။
ဒါတွေအားလုံး ဟာ အကြောင်း အကျိုးနဲ့ ဆက်စပ်တာချည်းဘဲ။ တခု ပေါ်မှာ တခုမီနေတာ လို.ပြောရင်ရမယ် ။ တရားဟောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ် နားလည်တာကို ကိုယ်ပြောနေတာပါ၊
ပြောခြင်နေတဲ့ အကြောင်းရင်းက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကံဇာတာဟာ မြန်မာတွေရဲ့ကိုယ် နှုတ် နှလုံးနဲ့ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှူ တွေပေါ်မှာ တည်ပါတယ် ၊ မီပါတယ် ဆိုတာကို ပြောခြင်လို.ဘဲ။ မြန်မာတွေဟာ ဘယ်တုန်းကမှ ကြိုတင်တွက်ဆမှု တွေ ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုတွေ မရှိခဲ့ပါဘူး။ လူဘ၀ နဲ့ မြင် မြင်သမျှ ဘ၀ အားလုံးဟာ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ သင်္ခါရ ဘဲလို.စွဲမြဲ စွာ ယုံကြည် ပြီး ၊ ဘ၀ဆိုတာဟာ သမုဒ္ဒရာထက် ခဏတက်သည့် ရေပွက်ပမာလို. လက်ခံကြပါတယ၊် မမှန်ဘူးလို မပြော လိုပါဘူး ၊ ဗုဓ္ဒဘာသာဝင် မှန်ရင် ကံဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာကိုတော့ နားလည်ကြဘို.ကောင်းပါ သေးတယ် လို. ဆိုခြင်တာပါ။
တချိန်က အင်္ဂလိပ်ဟာ ပြင်သစ်နဲ.ရော စပိန်နိုင်ငံနဲ.ပါ ယှဉ်ပြိုင်ပြီး နယ်ချဲ့စစ်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲ ခဲ့တာမှာ စစ်အင်အားတွေ အမြဲ အဆင်သင့် ပြင်ဆင်
ထားကြတယ် သူတိုအချင်းချင်းလဲ ဘတပြန်-ကျားတပြန်ဆိုသလို အနိုင် အရှုံးတွေရှိခဲ့ကြ တယ်၊ သူတို.အချင်းချင်းကြား သမီးပေး သားယူ ဂဟေဆက်
တာတောင် ရန်မအေးဘူး ။ သတိရတာတခု ပြောရရင် မြန်မာ့သမိုင်းမှာလဲ ဒါမျိုးတွေရှိပါတယ် ၊ မှတ်မှတ်ရရ ၁၈၆၆ ခု နန်းတွင်းအရေးတော်ပုံဟာ သမီး( တောင်ညို ထိပ်ခေါင်တင်) လင်ယူမှားလို. ဖအေ (ကနောင်မင်း) ခေါင်းပြတ်ခဲ့ရ
တာရှိဘူးတယ်၊ ဂဟေဆက်လဲ ဆက်ဆက်ဘဲ ။ သတ်ရဲသူ( မြင်ဂွန်းမင်းသား)လဲ မင်းမဖြစ်ပါဘူး ၊ ငါးရန်. ၂ ကောင် (အင်္ဂလိပ်/ပြင်သစ်) ကိုပါ)လွတ်ခဲ့တာ
ဘဲရှိတယ်၊ အဲဒီဟာရဲ့ အကျိုးဆက်ဟာ သီပေါလက်ထက်မှာ မြန်မာတွေအား
လုံး အင်္ဂလက်အောက်ကျွန်သဘောက်အဖြစ်ရောက် ခဲ့ရ တယ် ။
ဒါတောင် မြင်ကွန်းက အင်္ဂလိပ်ဟာ သီပေါကို နန်းချပြီးရင် သူ.ကို နန်းတင်ပေး
လိမ့်မယ်လို. မျှော်လင့်ထားပုံ ရှိတယ်၊ သူကိုဖမ်းပြီး ကြိုးစင် မတင်တာကတော ရတနာပုံ နေပြည်တော် မန္တလေး ဟာ အဲဒိ အချိန်(၁၈၆၆ ခု)ုက အင်္ဂလိပ်ပိုင် နယ်မြေ မဟုတ်လို.ဘဲပေါ့ ။ သူဟာ အင်္ဂလိပ်ကို ပုန်ကန်တာမဟုတ်လို.ဘဲ၊
ဒါတောင်အင်္ဂလိပ် တယောက်ကိုသာ သတ်ကြည့်ပါလား မြင်ဂွန်း စေ့စေ့
ညက်ညက်ကြေပြီး အမှုံဖြစ်သွားမယ် ။ သာယာဝတီက သုပန္နကဂဠုံရာဇာ
ဘာဖြစ် သွားတယ်ဆိုတာသာ ကြည့်ပေတော့။ အင်္ဂလိပ်ကုမ္ပဏီတွေ
ကိုထိ လိုက်တော့ မြန်မာပြည် ဘာဖြစ်သွားသလဲ ကော သိကြတယ် မဟုတ်
အင်္ဂလိပ်ဟာ စိတ်ကူးကြံစည်မှု၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှူ ကောင်းတယ်၊ လူအားလက်နက်အားနဲ့စစ်အင်အားတောင့်တင်း တယ် ၊ တသွေး တသံ တမိန်
့နဲ့ စစ်ရေးမှာ မြန်မာတွေ အစစအရာရာ မယှဉ်နိုင်ဘူး ။ အခုရော ယှဉ်နိုင်ပြီလား လို. မေးရင် မရူးစမ်းပါနဲ. လို.ပြောလိမ့်မယ်၊ မြန်မာတွေဟာ ဗုဒ္ဒဘာသာတွေပါ ။ ဂေါတမ ဟာ ခတ္တိယ နွယ်ဘွား စစ်သား မျိုးက ဆင်းသက်တာ စစ်မှုတောင်
မထမ်းဘဲ တောထွက်ခဲ့တယ် ၊ ဒါကို တချို.ဘုန်းကြီးတွေက စစ်မှု ထမ်းခြင်း ဟာ ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် လုပ်ကိုင်စားသောက်တဲ့ အပစ်ကင်းတဲ့ အလုပ်တခု မဟုတ်ဘူးလို. အဓိပါယ် ဖေါ်ကြ သေး တယ်၊ သူ.ဟာနဲ့သူတွေ မှန်ပါလိမ့်မယ်၊
ဘုန်းကြီးတချို.အကြောင်း ဆက်ပြောရရင် မကောင်းတော့ပါဘူး၊ မင်းတုန်းမင်းလက်ထက်ကထဲ သိသိသာသာ မြန်မာတွေ ခေတ်မီတိုးတက်ဖွံဖြိုး
ဘို. ခေါင်းဆောင်တွေ ကြိုးပန်းခဲ့ကြသော်လဲ လက်တွေ.မှာ ဘုန်းကြီးတွေ ၀င
်ရှုတ်လို. မြန်မာတာတွေ ကျွန်ဖြစ်ရတယ် ၊ နောက်ဆုံးတော့ “ဘုရားဖက်တော့ အသက်ရှည်” ဆိုတဲ့ အတိုင်း၊ ဘုရားဖက်ပြန်တော့ ရွှေခွါမှူ နဲ အဖမ်းခံရတယ် ဆိုတဲ့ ပုံပြင်လို ဖြစ်ခဲ့ရတယ် ၊ အဲဒါကို ကံ တရားလို. ပြောမလား? ။ ရိုးရိုး စကားနဲ့ ပြောရရင် မြန်မာတွေဘယ်လောက် တိုးတက်ခြင်နေပေစေ ၊ မြန်မာမှူ
နဲ့ ပြောရပြန်ရင် အလှူတခု ဖြစ် မြောက်ရေးဟာ အလှုရှင်စေတနာ၊ အလှူခံ၊ လှူဖွယ်ပစ္စည်း ၊ စသည်တို.ပြည့်စုံမှသာ ဖြစ်မြောက်တယ် ဆိုတဲ့စကားလို မြန်မာ နိုင်ငံတော် ခေတ်မီ တိုးတက်ဖွံဖြိုးရေး အတွက် မြန်မာတွေ ဗလ ၅ တန် ပြည့် စုံဘို. လိုပါတယ် ဆိုတာကို လူကြီးများ ကို ဦးထိပ်ထားပြီးြေ့ပာခဲ့ ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
မကြာခဏ ကြားဘူး နားဝရှိနေ တဲ့ စကားကတော့ မြန်မာတွေ ရဲ့ တိုးတက်ဖွံဖြိုး
မှုတွေကို မလိုသူတွေက ဟန်.တား နှောက်ယှက်၊ ဖျက်လို ဖျက်ဆီး လုပ်နေလို.ဆိုတဲ့ ထမင်းရေပူလာလျှာလွဲ စကားကို ကြား ကြားနေရတာဘဲ၊မြန်မာတွေဟာ ခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင်း တွေလို. ဆိုတာဘဲပေါ့ လေ။
အခုလဲ လာပြန်ြ့ပီး ပါတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းရေး ဆိုတဲ့ ငကြောင်တွေ ၊ အင်ဂျီအိုဆိုတာတွေက မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတက် ဖွံ.ဖြိုးရေးမှာ ၊ အင်္ဂလိပ်တို.အမေရိကန်တို.လုပ်တာမှမဟုတ်ရင် အထူးသဖြင့် ရုရှား တရုတ် ကိုရီးယား(မြောက်) တို.နဲ့ လုပ်တာတွေကို ဒေသခံမြန်မာ တွေကို သွေးထိုး လှုံ.ဆော်ပြီး ဟိုဟာ ကန်.ကွက်ခိုင်း၊ ဒီဟာဆန်.ကျင်ခိုင်းနေကြ တယ် ။ စီးပွားရေးစားကွက်
လု နေတယ်ဆိုတာလို.ဘဲ မြင်တယ်။ ပြောဘူးတယ်ထင်ပါရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ
တိုးတက်ဖွံဖြိုး မှူတွေ ကို နှောက်ယှက်နေကြတယ် ဟန်တားနေကြတယ် ကပျက် ယပျက် လုပ်နေကြတယ် ၊ အမှန်ကတော့ အစိုးရ ကို အကြပ်ကိုင်ပြီး
ကိုယ် ဝေစုအတွက် ဈေးဆစ်နေတယ်လို. ဘဲ ဆိုရ မလား မသိဘူး ။ အပြင်သူ
နဲ့ လုပ်ရင်လဲ မြန်မာ နိုင်ငံတော် ခေတ်မီ တိုးတက်ဖွံဖြိုးရေး ကို တန်ရာတန်ဘိုး မပေးဘဲအဖိုးဆာနာ မပေးဘဲ မရဘူး ၊ လူသေရင်တောင် ကူးတို.ခ ဆိုပြီး
အဖိုးအခ ပေးရတယ်၊ ခေါင်း သုံးရင် ခေါင်းဘိုး၊ ဖျာလိပ်နဲ့ချရင် ဖျာလိပ်ဘိုး၊ မြေမြုတ်ခ ၊ သဂြိုလ်ခ ဆိုတာတွေ ပါသေးတယ် ဆိုတာ နားလည်ကြရမယ် ။ အနဲဆိုး ကန်တော့ပွဲ အုံးပွဲအတွက် ကုန်ကျစားရိတ်တွေရှိမယ် ။
တိုးတက်မှူကို မလိုလားသူတွေလား တိုးတက်ခြင်သူတွေဟာလူဆိုးတွေ
လား ၊ တိုးတက်ခြင်တာဟာ အပစ်တဲ့လား။ တိုးတက် လိုသူ မတိုးတက်လိုသူ ဘယ် လို ခွဲခြားမလဲ သူတိုကြား ကွာဟမှူကို ဘယ်လို ညှိကြမလဲ ။ ငွေဆိုတာ
ကို လူတွေ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ အချိန်ကစပြီး လူ.လောကမှာ ငွေနဲ့ဝယ်ရင် မရတာ မရှိဘူးလို.ပြောစမှတ် ရှိတယ် ။ ၁၈၂၄ ခုက နောက်ပိုင်း မြန်မာတို.ဟာ နည်းမျိုးမျိူးနဲ့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို.ခံရတယ်. ရောက်လာသမျှဘယ်သူနဲ့မှလဲ ယှဉ်ပြိုင်ပြီး စီးပွားကုန်သွယ်လို မရ။ နောက်ပိုင်းက ထောက်ပံ - ပံ့ပိုးပေးမဲ့သူလဲ မရှိ ။ လူမွဲစာရင်းသာ ၀င်သွားခဲ့ ရတယ်၊ အခုထိ တောင် လွတ်လွတ် ကင်းကင်း မရှိ သေးဘူး ။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဖွံဖြိုးမှူ အနဲ ဆုံးသောနိင်ငံများစာရင်းမှာသွင်း
ထားတာ အခုမှ မဟုတ်ဘဲ၊ လေ့လာရင် သိမှာပေါ့ ။
ပြီးတာတွေ မေ့လိုက်ပါတော့တဲ့ လား၊ ဂေါတမ ဗုဓ္ဒ စကားတွေ ဟာ နှစ် ၂၆၀၀ ရှိနေပြီ လေ သိတယ် မဟုတ်လား။ ကြည့်လေ ရှေးဟောင်း အဆောက်အဦး ထိမ်းသိမ်းရေးဆိုတာတောင် ကိုလိုနီခေတ်က အင်္ဂလိပ်တွေ ဆောက်သွားတဲ့ အဆောက် အဦးတွေကို ရည်ရွယ်ပုံရှိတယ်၊ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ် ခေါ်မြန်မာ့ခေတ်
က ဖျက်သိမ်းခဲ့တဲ့အဆောက်အဦး တွေ ပြန်ဆောက်၊ မြန်မာနာမယ်
ပေးခဲ့ လမ်းတွေ အင်္ဂလိပ်နာမည် ပြန်ပြောင်း ၊ ပြည်သူပိုင် သိမ်းခဲ့တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ပြန်ပေး၊ အထူးသဖြင် ဘုံဘေဘာမား ၊ ဧရာဝတီ-ဖလုပ်တေလာ၊ ဘားမားကေါ်ပိုရေးရှင်း စသည်တို. ဆုံးရှုံးနစ်နာခဲ့ရ တာတွေ ထိုက်သင့်သလို ပြန်လျှော် ၊ ကြွေး မကျေမချင်း မြန်မာနိုင်ငံကို ကုလသမဂ က ထိမ်းသိမ်း ထား အုံးမလားမသိဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘက်က ကုလားနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ဘက်က တရုတ်တွေကရော၊ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ နေထိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်ခွင့် ရရင် ပြီးရောတဲ့ လား ?
ပြောသာပြောရတယ် ဒီလိုတော့လဲ သိပ်ဖြစ်နိုင်ပုံမရှိပါဘူး လို.ယူဆနိုင်
ပေမဲ့ ။ လောကမှာ မဖြစ်သေးတာတွေဘဲရှိတယ် ဆိုတော့လဲ ဘာ ပြောရမှန်း တောင်မသိဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံလို ဇီးရွက်နိုင်ငံ ၊ မြန်မာတွေလို လီလီပွတ္တီးယန်း တွေ ဘာလုပ် နိုင်မှာမို.လဲ ။ မြန်မာလိုအရာရာ ချိနဲ့နေတဲ့ နိုင်ငံမှာ ဘာမဆိုဖြစ်
နိုင်တယ် ၊ မြန်မာမှာ တောင့်ခံ နိုင်မဲ့ အောင်မောင်း မရှိ တော့ဘူးထင်ပါရဲ့ ။ အောင်မောင်း တောင့်ထား ဆိုတဲ့ စကား ပျောက်သွားတာ ကြာပြီ ။ မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတက်ဖွံဖြိုးရေး ကို မြန်မာတွေ လုပ်ရမယ်ဖြစ်တယ်၊ မြန်မာတို.ရဲ့ တာဝန်ဘဲ ၊ ဟုတ်ရဲ့လား ၊ ဘယ်သူပြော သလဲ ၊ မြန်မာဘယ် နှယောက်က အဲသလို ခံယူသလဲ? ဒါ ဒို.ပြည် ဒါ ဒို.မြေ ဒါ ငါတို. ပြည် ၊ မှားမှား မှန်မှန် ဒို.နိုင်ငံ ခိုးခိုးဆိုးဆိုး ဒို.လူမျိုး ၊ ဘယ်သူခံယူသလဲ၊ နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံတော်သားတို.
အပေါ် သစ္စာစောင့်သိပါမည် တဲ့။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူတွေရော ဘုန်းကြီးတွေပါ အားလုံးဟာ ပစ္စေကဗုဒ္ဒါနဲ.ရဟန္တာတွေချည်းဘဲ သာမန်လူသားတယောက် မှ မရှိတော့ဘူး၊ကျွတ်တန်းဝင်
ဘို. နေရာ တန်းစီနေကြတာဖြစ်တယ် ၊ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်သူတို.အလုပ်မဟုတ် ဘူး၊ သူတိုတာဝန် မဟုတ်ဘူးတဲ့.လား?